Igadi ye-Eco Ponies-ifama-yokuhlala epholileyo kwikhabhathi yokubuyela - I-Airbnb
Igadi ye-Eco Ponies-ifama-yokuhlala epholileyo kwikhabhathi yokubuyela
Menangah, Daerah Tutong, Brunei
Ifama sinombuki zindwendwe onguEyon
Fumanisa iBrunei yokwenyani kwindawo ekuphela kwayo eqhutywa lusapho, indawo yokuhlala yasefama yasekuhlaleni, ebekwe kwindawo entle engasemva yehlathi laseTutong. Indawo yethu encinci ibonelela abo bafuna ukukhululeka kubuphithiphithi bobomi bemihla ngemihla.
Vuka uvuse iintaka ezintyiloza ngenj' ixukuxa, uphefumlele umoya omtsha opholileyo kwaye uyonwabele ubuhle bendalo, ukonwabele ukutya okuphilayo kwalapha ekhaya kunye nokwamkela iindwendwe zemveli kwisitiya sethu esincinci esincinci.
Uxolo, ukuzola, ukuzola kunye nolonwabo ngamanyathelo nje ambalwa ukusuka e-Eco Ponies Garden
Nangona indawo yethu yokuhlala kwikhabhinethi intle isisiseko sobulumko, iibhedi zitofotofo kwaye ziza nenethi yokuthintela iingcongconi. Iindwendwe zamkelekile ukuba zonwabele yonke igadi kunye nendlu yethu yale mihla emelene nayo enomabonakude wedijithali, i-aircon, ikhitshi, ukufikelela kwi-intanethi okulinganiselweyo kunye neendawo zokuhlambela.
Indawo yethu yiBrunei engekafunyaniswa, apho amasiko amadala agcinwa ephila ngabantu abavela eDusun, eKedayan, eTutong naseIban abantu bomthonyama bomthonyama, nangona ubukhulu becala siphila ubomi bale mihla.
Kusoloko kukho into eqhubekayo, kunye nemisebenzi exhomekeke ngokwenene ekubeni ngubani okhoyo ngemini - kwixesha elidlulileyo, bendikhe ndathatha iindwendwe zikhangela ukutya kwasehlathini, ukubamba inkala emanzini, ukufunda ukuluka i-rattan, ukubona indlela ambuyat (isitya sethu semveli} enziwe, aqhelisela imingqungqo, aphulaphule iintsomi zasehlathini, engcamla ubusi obuphuma ngqo ezindlwini, ade abone nenkunzi yehagu yasendle ihlutywa ulusu!
Umbuki zindwendwe ngu- Eyon